को’रोना महामारीमा भ्र’ष्टाचार गरेको आ’रोपमा जिम्बाब्वेका स्वास्थ्यमन्त्री प*क्राउ,,हेर्नुहोस! – मेचीमहाकाली डट नेट NEWS
को’रोना महामारीमा भ्र’ष्टाचार गरेको आ’रोपमा जिम्बाब्वेका स्वास्थ्यमन्त्री प*क्राउ,,हेर्नुहोस!
काठमाण्डाै – कोरोना भाइरस नियन्त्रणका सामग्री किन्दा भष्टाचार गरेको आरोपमा जि’म्बाब्वेका स्वा’स्थ्य मन्त्री प’क्राउ परेका छन् ।
कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणको लागि बन्दोबस्ती र मेडिकल सामग्रीमा भ्र’ष्टाचार गरेको अ’भियोगमा जिम्बाब्वेका स्वास्थ्य मन्त्री ओ’बादी मोयो गए राति प’क्राउ परेका हुन् । जिम्बाब्वेकाे भ्र’ष्टाचार नि’यन्त्रण आयोगले उनलाई प’क्राउ गरेको हो ।
मन्त्री मोयोलाई प’क्राउ गरिएको र अ¥दालतमा उपस्थित गर्ने तयारी भइरहेको आयोगका प्रवक्ता जोन माकामुरेले बताएको चिनियाँ टे’लिभिजन सी’जीटीएनले जनाएको छ ।
मन्त्री मोयोले खरिद प्रक्रियाको गलत प्रयोग गरेर लाखौँ अमेरिकी डलर भ्र’ष्टाचार गरेको आ’रोप लागेको छ । जिम्बाब्वेमा औ’षधि वितरण गर्दै आएको एक क’म्पनी गएकाे हप्ता छानबिनमा तानिएपछि मन्त्रीले नै भ्र’ष्टाचार गरेको भे’टिएको हो ।
जिम्बाब्वेमा अहिलेसम्म कोरोनाका पाँच सय बिरामी छन् भने चार जनाको ज्यान गएको । स्वास्थ्य मन्त्री प्रकरणपछि जिम्बाब्वेमा वर्तमान सरकारमा दुई ज’ना मन्त्री भ्र’ष्टाचारको अभियोगमा प\_क्राउ परेका छन् ।